कांग्रेसमा नेविसंघ विवाद: मौन ब्रत देखि अनसन सम्मको तयारीमा नेता !::Hamrodamak.com
कांग्रेसमा नेविसंघ विवाद: मौन ब्रत देखि अनसन सम्मको तयारीमा नेता !
कांग्रेसलाई भातृ संगठन नेविसंघको विवाद मिलाउन हम्मेहम्मे परेको छ। मिलाउन नसकेपछि काँग्रेसका शीर्ष नेता नै आरोप प्रत्यारोप गर्न थालेका छन् ।
काठमाडौँ । कांग्रेसलाई भातृ संगठन नेविसंघको विवाद मिलाउन हम्मेहम्मे परेको छ। मिलाउन नसकेपछि काँग्रेसका शीर्ष नेता नै आरोप प्रत्यारोप गर्न थालेका छन् । नेतृत्वले निर्णय गर्न नसकेपछि नेविसंघको आगामी कार्तिक १६ गतेबाट सुरु हुने भनेको अधिवेसन सर्ने पक्का पक्कि भएको छ भने यहि विवादका कारण मंसिरमा हुने भनिएको महासमिति बैठक पनि अनिश्चित बन्दै गएको छ ।
नेविसंघमा ३२ वर्षे हदम्यादसहितको विधान काँग्रेस केन्द्रीय समितिमा बहुमतले पारित भएपछि नेताहरुमा बढेको असमझदारीले गर्दा पार्टी बैठक नै अनिश्चित भएको छ । २१ असोजमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नेविसंघको विधान पारित गरेको थियो । तर, त्यसमा बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंह लगायतका नेताहरुले नोटअफ डिसेन्ट नै लेखेका थिए ।
त्यसयता दर्जनौँ निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न लगातार काँग्रेस बैठक बस्नुपर्ने भएपनि काँग्रेस नेताहरु संवादविहीन भएर बसेका छन् । असोज २१ गते मध्यरातमा सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले बहुमतको बलमा नेविसंघमा उमेरहद लगाउँदै विधान पारित गरेपछि देउवा इतरका नेताहरू असन्तुष्ट बनेका थिए ।
त्यसलगत्तै २५ असोजमा बोलाइएको बैठक पौडेल लगायतका असन्तुष्ट नेताहरुले बहिष्कार गर्ने तयारी गरेपछि सभापति देउवाले बैठक नै स्थगित गर्न पुगेका थिए । अहिले काँग्रेस नेताहरू कोही दशैँ मनाउन आ–आफ्नो जिल्लामा पुगेका छन् भने रामचन्द्र पौडेल लगाएतका कोही तिर्थाटनमा व्यस्त छन् ।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नेविसंघको अधिवेसन कार्तिक १६ बाट हुनुपर्ने हो । तर, त्यो समय आउन अव लगभग एकसाता मात्रै समय छ । यो बीचमा विभिन्न क्याम्पसहरुमा अधिवेसन गर्नुपर्ने हुन्छ । जबकी ति क्याम्पसहरु दशैतिहार र छठपछि मात्रै खुल्छन् । यस्तो अवस्थामा कार्तिक १६ को अधिवेशन कुनै हालतमा हुने सम्भावना देखिदैन ।
यता, पौडेल पक्ष र सिटौलापक्षका नेविसंघका नेताहरुले भने नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महरको कार्यकाल लम्ब्याउन योजनाबद्ध ढंगले नेविसंघको अधिवेसन रोक्न लागेको नेविसंघलाई असफल बनाउन यो षड्यन्त्र विरुद्ध अनसन थाल्ने चेतावनी दिएका छन्।
दमक । झापाको दमकबाट बुधबारदेखि हराएकि झापा बिर्तामोड कृषी चौकनिवासी शुक्रराज जोगीकी ७ बर्षिया बालिका पुर्णिमा जोगी बिहिबार भेटिएकि छिन् । बुधबार बिहान छीमेकी दिदिले लिएर गएकी छोरी पुर्णिमा बिहिबार बिहान परिवारको सम्पर्कमा आएकि हुन्...
दमक,३० जेठ । संघीय सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम झापाको दमकमा पनि शुरु भएको छ । आज बुधबार नगरपालिकामा औपचारिक एक कार्यक्रम गरि १ सय ७६ युवालाई रोजगारी प्रदान गरिएको जानकारी गराईएको हो...
काठमाडौँ, २७ जेठ । समाजवादी पार्टी, नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले गुथि विधेयकको नाममा जनताको धार्मिक साँस्कृतिक आस्थामाथि प्रहार गर्नु सरकारको ठूलो गल्ती भएको बताएको छ । उनले यो कुरा गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण...
नगरपालिका भएको ३७ वर्ष पछि दमकको बाह्रघरेमा खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य शुरु
नगेन्द्रमणि न्यौपाने दमक । झापाको दमक नगरपालिका भएको ३७ वर्ष पछि बल्ल दमकको १० नम्बर वडामा खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य शुरु भएको छ । यसरी आफ्नो वडामा खानेपानी आयोजना बन्ने भए पछि स्थानीबासीहरु हर्षित भएका...
प्रेम ! मेरो भ्रम थियो
आजको दिनमा पनि हामी चिच्याउँदै जात, धर्म र वर्गको कुरा गर्छौ त्यसका वाबजुत आज मैले देखे एउटा मुसलमानको बच्चाको शरिरमा रगतको कमी हुँदा अर्को हिन्दुको बच्चाले त्यो कमी पूरा गर्न मिल्दोरहेछ फेरि हाम्रो समाजमा...